Chii chitsva muIOS 6 beta 14 yevagadziri? | IPhone nhau
Chii chitsva muIOS 6 beta 14 yevagadziri?
Zvishoma nezvishoma isu tiri kusvika kwekupedzisira kutenderera kwekuyedza kweiyo nyowani Apple anoshanda masystem. Kutenda kune vanogadzira, iro guru apple rinogona kukwenya zvese zvakadzama zveanoshanda masisitimu ayo ari padyo padyo neiyo yekupedzisira vhezheni. Kuvhurwa kwekupedzisira kuchaenderana nekuvhurwa kweiyo iPhone 12 ingangodaro mukupera kwaGunyana kana kutanga kwaGumiguru. Mazuva mashoma apfuura yakatangwa iOS 6 beta 14 yevanogadzira nedzimwe nhau dzakanaka, kuwanda kwekuvandudzwa kwebug, uyezve nekusimudzira kwekuita pane ese madhizaini.
Takasvika pa beta 6 yeIOS 14: nhau
Sezvandambotaura pakutanga kwechinyorwa, Apple yakatanga mazuva mashoma apfuura beta rechitanhatu reIOS uye iPadOS 14. Beta yekutanga yakasvika muna Chikumi 22 uye kubvira ipapo nhau dzave kuitika mune yega yega vhezheni yakapihwa Apple nevagadziri . Ino nguva yaisazove shoma uye isu tine zvidiki zvidiki mashandiro uye zvigadziriso zvinoita kuti iOS neIpadOS ive yakanyanya kunatswa uye akasiyana maitiro. Tichataura pamusoro pavo:
Kumba skrini muApple Mepu: Semamwe maapplication, kana isu tikangotanga iyo Apple Mepu app kekutanga mushure me beta, skrini inoratidzwa nenhau dzeIOS 14 mukati mekushandisa. Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti makuru makuru eiyo iPadOS uye iOS 14 ari bhasikoro kufamba, kusvika kwemitungamiriri uye kunyeverwa kweanomhanya makamera.
Yako yekuyera system muApple Mepu: nezuro Ini ndanga ndichitaura nezve ichi chitsva. Apple yanga ichida kumira zvichienderana nemakambani echitatu-bato senge Yelp kana Foursquare kuti vape pfungwa uye ongororo yenzvimbo nenzvimbo. Kuti uite izvi, yagadzirisa chirongwa chekupimha icho chinongowanikwa kune yakasarudzika uye diki boka revanhu vari mukati mebeta, izvozvi.
Nguva yekusarudza muClock: yatove mune yapfuura beta Apple yakatidzosera iyo inotsvedza sezvakagara iine iOS. Nekudaro, pachiitiko ichi, bhokisi rakatenderedzwa netambo yeyero inoratidza kuti bhokisi pane iyo nguva neminiti zvinogona kufambiswa kuti zvichinje.
AirPods Pro Spatial Audio: Iyo Spatial Audio mashandiro akave akaverengerwa mukati meMusarudzo dzekuwanika. Iri basa rinokutendera kuti umise iyi modhi inowanikwa muAirPods Pro.Zvinobvumidza kutora chikamu muchiitiko chinonyudza kudzivisa kuti odhiyo inopfuudzwa kubva ku iPhone kuenda kuAirPods haina kuchinjwa patinofambisa musoro wedu. Kunyange hazvo chinhu ichi chakabatanidzwa, hachisati chashanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Chii chitsva muIOS 6 beta 14 yevagadziri?
Zvinotaridza kusanzwisisika kwandiri kuti hapana munhu ari kutaura nezve ruzivo rwekuda kuziva izvozvi.
Iye zvino ma waya asina waya (anoenderana) chinja ruvara rwakatungamirwa kana kuchaja kwapera.
Hapana anoita kunge akaona izvi kupfuura ini. ‍♂️
Mangwanani akanaka taura nezve sarudzo yemadhadha mumamepu asi ini handioni pane chero kupi kuSpain hakuzove kuri kuwanikwa here?
Ichi chitsva hachiwanikwi muSpain. Kunze kwekunge tazvisimbisa. Rangarira kuti basa racho rinoreva makamera mumarobhoti nemaradar. Shuwiro yakanakisa.
YouTube inoyerera vhidhiyo vhidhiyo chimiro mukuyedza
Yakagovaniswa Gwaro Kugadziridza Kunouya kuGoodNotes 5